येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्व – Word of Truth, Nepal
“अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो” – यूहन्ना १:१
“अनि थोमाले जवाफ दिएर उहाँलाई भने: “हे मेरा प्रभु! र हे मेरा परमेश्वर!” – यूहन्ना २०:२८
“ख्रीष्ट…जोचाहिँ सर्वोच्च, सदासर्वदै धन्य परमेश्वर हुनुहुन्छ” – रोमी ९:५
“त्यस धन्य आशाको, र हाम्रा महान् परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको महिमापूर्ण आगमनको बाटो हेर्दै जिउनुपर्छ” – तीतस २:१३
यूहन्ना १:१ (यहोवाका साक्षीहरू यसलाई उनीहरूको अङ्ग्रेजी न्यू वर्ल्ड ट्रान्सलेशन (New World Translation) मा “a god” (“एक ईश्वर”) भनेर अनुवाद गर्न बाध्य भएका छन्
उहाँलाई “परमेश्वरको पुत्र” भनिएको छ
टिप्पणी: येशू ख्रीष्टको समयमा “परमेश्वरको पुत्र” भन्ने संज्ञाले “परमेश्वरसित बराबर” भन्ने अर्थ जनाउँथ्यो, अर्थात् “स्वभावमा समान”। येशूले आफू परमेश्वरको पुत्र हुँ भन्ने दाबी गर्नु आफू परमेश्वर भएको पूर्ण दाबी गर्नु थियो। यी पदहरूले यस कुरालाई पर्याप्त गरी छर्लङ्ग पार्दछन्: यूहन्ना ५:१७-१८; यूहन्ना १०:३३,३६; यूहन्ना १९:७।
उहाँलाई “प्रभु” भनिएको छ (ग्रीक: कुरिअस्)
टिप्पणी: प्रभु येशूको समयमा प्रायः “सेप्टुवाजिन्ट” (पुरानो नियमको ग्रीक अनुवाद) चलनचल्तीमा थियो जसमा “यहोवा” शब्दलाई रूपान्तर गर्न “कुरिअस्” प्रयोग भएको छ (“यहोवा” लाई नेपाली बाइबलको पुरानो नियममा रूपान्तर गर्न “परमप्रभु” प्रयोग गरिएको छ)। “यहोवा” शब्दले अद्वितीय सत्य परमेश्वरलाई जनाउँछ भन्ने कुरा यशैया ४५:५-६ ले देखाउँछ।
उहाँलाई “महिमाका प्रभु” भनिएको छ: १ कोरिन्थी २:८ लाई भजनसङ्ग्रह २४:८-१० सित दाँज्नुहोस्
उहाँलाई “पवित्र जन” भनिएको छ: प्रेरित ३:१४ लाई होशे ११:९ र यशैया ४८:१७ सित दाँज्नुहोस्
उहाँलाई “प्रथम र अन्तिम” भनिएको छ: प्रकाश १:१७-१८ र २:८ लाई यशैया ४४:६ सित दाँज्नुहोस्
उहाँलाई “अल्फा र ओमेगा” भनिएको छ: प्रकाश २२:१३,१६ लाई प्रकाश १:८ सित दाँज्नुहोस्
उहाँलाई “म हुँ” भनिएको छ: यूहन्ना ८:५८ र १८:६ लाई प्रस्थान ३:१४ सित दाँज्नुहोस्
निष्कर्ष — नामहरू
अझ, यी यहूदीहरू कट्टर एकेश्वरवादी (परमेश्वर एकमात्र हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने, monotheist) हरू थिए। यहूदी विश्वासको केन्द्रीय बुँदा यो थियो, “सुन हे इस्राएल, तिमीहरूका परमप्रभु परमेश्वर एउटै प्रभु हुनुहुन्छ” (व्यवस्था ६:४)। परमेश्वर र मानिसका बीच नाप्नै नसकिने दुरी छ भन्ने कुरामा उनीहरू विश्वास राख्थे। तरैपनि यिनै मानिसहरूले यी नामलाई येशू ख्रीष्टलाई जनाउन प्रयोग गरे।
यूहन्ना १:४ “उहाँमा जीवन थियो”
यूहन्ना १४:६ “जीवन म हुँ”
प्रेरित ३:१५ “जीवनका कर्ता”
येशू ख्रीष्ट सिद्ध (perfect) हुनुहुन्छ (“सिद्ध” को सामान्य बाइबलीय अर्थ: पूर्ण, कुनै कुरा घटी, अपूग नभएको): हेर्नू: कलस्सी १:१९; कलस्सी २:९-१०
निष्कर्ष — गुणहरू
यूहन्ना १६:१५ — “पितासँग भएका सबै थोक मेरा हुन्’ (पितासँग भएको प्रत्येक गुण (attribute) पुत्रसँग पनि हुन्छ)
यूहन्ना १७:६ — “मैले ती मानिसहरूकहाँ तपाईंको नाम प्रकट गरिदिएको छु” (पवित्र शास्त्रमा परमेश्वरको “नाम” भन्नाले परमेश्वरको चरित्र भन्ने बुझिन्छ अर्थात् परमेश्वरको सर्वस्व व्यक्तित्व। तसर्थ, येशू भन्दैहुनुहुन्छ, “तपाईं कस्तो किसिमको परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले देखाइदिएको छु। मैले तपाईंको चरित्रलाई दर्शाइदिएको छु।”)
हिब्रू १:२ ख्रीष्टले नै युगहरू (“संसारहरू”) पनि बनाउनुभयो
निष्कर्ष — कार्यहरू
उयर्युक्त “कार्यहरू” आश्चर्यकर्महरूको वर्गमा राखिन्नन् किनकि आश्चर्यकर्महरू अगमवक्ता वा प्रेरितहरू जस्ता नियुक्त माध्यमद्वारा गरिनु सम्भव थियो।
पुरानो नियममा यस्ता “कार्यहरू” को श्रेय परमेश्वरलाई दिइएको मात्र छैन, ती त एक मात्र सत्य परमेश्वरको पहिचान दिने सूचक हुन्।
विश्राम-दिन (मत्ती १२:८ — येशू ख्रीष्ट “विश्रामदिनका पनि प्रभु हुनुहुन्छ”)। विश्राम-दिन परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा प्रत्येक यहूदीलाई थाहा थियो।
निष्कर्ष — दाबीहरू
“जसले ममाथि विश्वास गर्दछ”
लूका ७:३७-३८, ४४-४८ – परमेश्वरले मात्र पापहरू क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पाठकले बुझेका छन् भनी लूकाले मानिलिएका छन्। तसर्थ येशू परमेश्वर नै हुनुपर्छ!
यूहन्ना १२:३७-४१ – यहाँ १२:४० का शब्दहरूलाई यशैयाले यहोवालाई देखेपश्चात् लेखेका हुन् (यशैया ६:१,१०)। तर यूहन्ना भन्छन्, यशैयाले ख्रीष्टको महिमा देखेका हुन् (यूहन्ना १२:४१), किनकि पाठकले यशैया ६ अध्यायका यहोवा येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ भनेर जान्दछन् भनेर यशैयाले मानिलिएका छन्।
यूहन्ना १४:२८ – “मेरा पिता मभन्दा महान् हुनुहुन्छ” — यदि येशू स्वयं परमेश्वर नहुनुभएको भए, उहाँले कसरी आफूलाई पितासँग दाँज्न सक्नुहुन्थ्यो र? एउटा जाबो सीमित सृजित प्राणीले “पिता मभन्दा महान् हुनुहुन्छ” भन्ने कुराको विश्वास दिलाउन खोज्दै हिँड्नु भनेको त दुवै ईश्वरनिन्दा र हास्यास्पद कुरो हुन्थ्यो! सृष्टिकर्ता र सृष्टिका बीचको अन्तर अपार (infinite) छ र ती दुईलाई दाँज्नै सकिन्न। येशूले वास्तवमा त्रिएक परमेश्वरका व्यक्तिहरू बीचका कार्यगत भिन्नताहरूको चर्चा गर्दैहुनुहुन्थ्यो (ख्रीष्टले राजीखुशीसित आफैमा मनुष्यत्व र कतिपय सीमितताहरू धारण गर्नुभयो)। यो वास्तवमा ख्रीष्टको ईश्वरत्वकै प्रमाणिकरण गर्ने पद हो।
यूहन्ना १९:३७ – यूहन्नाले जकरिया १२:१० बाट उद्दरण गर्दैछन्। तर उक्त खण्डको प्रसङ्ग हेर्ने हो भने (हेर्नू: जकरिया १२:१) छेडिएका व्यक्ति त यहोवा हुनुहुन्छ। यसर्थ, येशू ख्रीष्ट परमेश्वर नै हुनुपर्छ।
१ तिमोथी १:१३ – (“उहाँ [येशू ख्रीष्ट] ले मलाई … सेवामा नियुक्त गर्नुभयो। हुन त म पहिले निन्दा गर्ने … थिएँ”) उनको जीवन परिवर्तित हुनु अगाडि उनले यहोवाको विरुद्धमा बोल्दै हिँड्थे भन्ने कुरा यहाँ पावलको अवश्य पनि होइन [पावल एक कट्टर यहूदी थिए]! तर उनले येशूको विरुद्धमा भने बोलेका थिए। पाठकले येशू नै यहोवा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझेका छन् भनेर उनले मानिलिएका हुनाले येशूको विरुद्धमा बोलिएका वचनहरू वास्तवमा ईश्वरनिन्दा थिए भन्ने कुरा पनि उनले मानिलिएका छन्।
गलाती १:१ – “पावल प्रेरित (न ता मानिसहरूबाट, न ता मानिसद्वारा, तर येशू ख्रीष्ट…द्वारा”) पावलले येशू ख्रीष्टलाई मानिसभन्दा भिन्न हुनुभएको भनेर यसरी तुलना गर्दछन्; येशू ख्रीष्ट परमेश्वर नहुनुभएको भए यसरी भन्न मिल्दैनथ्यो।
मत्ती १३:४१; १६:२७ र २४:३१ – यी खण्डहरूमा ख्रीष्टका स्वर्गदूतहरूको उल्लेख पाइन्छ। स्वर्गदूतहरू कसका हुन्?
प्रेरितहरूको समयदेखि यता त्यस्तो कुनै इसाईमत छैन जसले ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई प्रमुख सिद्धान्तको रूपमा पक्रेको छैन। यो सत्यता इसाई विश्वासकै जग हो (मत्ती १६:१५-१८)। येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई इन्कार गर्नेहरूले बाइबलीय र ऐतिहासिक अर्थमा आफूहरूलाई “ख्रीष्टियन” को संज्ञा दिनालाई उनीहरूलाई कुनै पनि अधिकार छैन।
Adapted from Dr. Alva McClain’s notes, revised by Dr. John C. Whitcomb and Ivan French, and put into this present from by George Zeller.
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-03-02 12:24:052020-04-27 16:22:46येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्व
महम्मद र येशू ख्रीष्टको बीचमा... मानिस कसरी धर्मी ठहरिन्छ?